Short Story:Ndakamusvira Maidei – Vanoda Zvinhu
Ndakachibva ndamuti mbaa mwana apa ndakagumhisa mboro yangu pamuviri pake mwana akabva angopera simba ndokupunzikira pa mhasa paaive akawarira. Ndakachitanga kukatanura rokwe raanga akapfeka riya zvoshoma nezvishoma kwakupinza ruoko mubhurugwa make wanikwe mangova mukuvisi wega wega. Mwana ndakamumenya akasara ava bagwe kushama iniwo kwakukatanura mbatya dzangu dzose. Ndaka tanga kumutsvoda pamuromo ndochidzika kuhuro kwakumboita long stop pa mazamu awo andakayamwa kusvikira mwan ajuita kuzvongonyoka souya ane mudzimu weshato ini kwakuti dzakei kumutomatisi kwacho kwakuchidya beche ndaiita zvokuti ndikamboti rurimi rwotekenedza kabhinzi ndochinja ndoita rokutsoda ungati muromo. Mwana akachibva ati aiwa zvakwana ndokunditi dzvii mboro kwakuiti mumukanwa make ndoo. Mboro yakamwiwa nekusvetewa ingati chihwitsi chezvitanda chiya apa rume ndaingoyuwira mutezo wachioma nyama dzasungana nekuterera kunakirwa.
Pedzedzo akabva angopuna apamboro akaibata muruoko gwake ndokuipfekera mubeche rake kwakutanga kuikoirira iye ini kwakuita manyawi kwakumuti dzvii paudyu hwake ndokutanga kutsimbirira beche mwana ndakamusvira akapuna kudaro kusvika ndanzwa achigwina gwina nokuchema asi pakuchema apa ndakamubata muromo sokuti ndaisada kuti vabereki vake vevari kumba yavo yokuvata vasanzwe. Ndakachimuvatisa manhede kwakuiita makwiriro echinyakare aya ekuti ini pamusoro iye pazasi ndaiti ndikati musoro wega ndomboipinza ndichigumira pamusoro wendozoipinza half ndichidaro kusvikira iye andidhonza kuti ipinde yose. Mwana anechikapa iyeye mboro yaiti ikanzi kurudyi ruboshwe yonzi mukati yomboita seinosvipiwa ichizomedziwa becherai ita ngati rine rurimi takazopinda pa highway no speed limit heheda ndokutanga kuita kunge parikupepetwa zviyo.